Iran oo Jabsatay Websetka dowlada Mareykanka iyo Sawirka Trump oo afka dhiig ka socdo oo … | Salaan Media
Iran oo Jabsatay Websetka dowlada Mareykanka iyo Sawirka Trump oo afka dhiig ka socdo oo …
Weerar dhinaca Internetka ayaa lagu qaaday dowlada Mareykanka, waxaana weerarkan durba sheegatay in ay ka dambeeyeen koox Iiraaniyiin ah oo ka cadheysan dilkii Mareykanka u geestay Jeneraal Qaasim Sulemani.
Koox burcad Internetka oo kasoo jeeda Iiraan ayaa sheegtay in ay jabsadeen Websetka dowlada Mareykanka, waxa ayna kooxdan durba websetka ku baahiyeen fariimo ka dhan ah Dowlada Mareykanka.
Websetka Dowlada Mareykanka ayaa kooxda jabsatay waxa ay ku baahiyeen Sawirka Madaxweynaha Mareykanka Donalnd Trump oo Iiraan feer la dhaceyso kadibna afka dhiig ka deenaya.
Kooxda jabsatay Websetka Dowlada Mareykanka ayaa sheegtay in weerarkan uu yahay mid ay uga fal celinayeen weerarkii diyaaradaha dagaalka Mareykanka ku dileen Jeneraal Qaasim Sulemani iyo saraakiil kale oo Iiraan u dhalatay .
Dowladaha Iiraan iyo Mareykanka ayaa waxaa soo dhax galay xiisad laga cabsi qabo in dagaal isku bedelo kadib dilkii Mareykanka u geestay Jeneraal Qaasim, waxaana jira cabsi laga qabo in dagaalka labada dal uu xaalad xun abuuro.